ICT.com.mm သည်ဝက်ဆိုဒ်ပလက်ဖောင်း အသစ်သို့ပြောင်းရွှေ့ထားကြောင်း လေးစားစွာ အသိပေးခြင်း ~ The ICT.com.mm Blog
ICT.com.mm သည်ဝက်ဆိုဒ်ပလက်ဖောင်း အသစ်သို့ပြောင်းရွှေ့ထားကြောင်း လေးစားစွာ အသိပေးခြင်း
We are writing this to inform you that we have migrated your go-to website for all your tech gadgets, ICT.com.mm toabrand new platform.
ကျွန်တော်များ ဒီစာကိုရေးသားရခြင်းမှာ ICT.com.mm သည်ဝက်ဆိုဒ်ပလက်ဖောင်း အသစ်သို့ပြောင်းရွှေ့ထားကြောင်း လေးစားစွာ အသိပေးရခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
What’s wrong with our previous platform?
We love so much that we have spent two years customising for our ICT shoppers such as DIY PC builders, unique URL, fine-tuning best performance possible in Myanmar and many many more. But time has come and challenged us to take the next phase.
အရမ်ကောင်းပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့၂ နှစ်ေကျာ်ရင်ခုန်စွာ ပုံစံမျိုးစုံဖြင့်တည်ဆောက်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်အချိန်အခါက နောက်တစ်ဆင့်ကိုတက်လှမ်းဖို့ကြိုဆိုနေပါတယ်။
ICT.com.mm hit5million page views in November, and we still feel like we’re spending too much time on coding to be the best ICT shopping platform possible in Myanmar. And, yes we are as ICT.com.mm previous platform’s checkout page top #1 most used in Myanmar.
ICT.com.mm က ၅ မိလီယံစာမျက်နှာ နိုဝင်ဘာလမှာ ရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့သားတွေဟာ ပရိုဂရမ်းမင်းကိုပဲ အချိန်ပိုပေးပြီး မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အကောင်းဆုံး အိုင်စီတီနဲ့ပတ်သက်၍ အွန်လိုင်းဈေးဝယ်တဲ့နေရာတစ်ခုအဖြစ်လုပ်ဆောင်နေလျက်ပါပဲ။ ဟုတ်ပါတယ်။ အရင်သုံးထားတဲ့ပလက်ဖောင်းရဲ့ မြန်မာပြည်မှာ ‌ဈေးဝယ်အများဆုံး #၁ ဝက်ဆိုဒ်လည်း ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
To be #1 in most categories is the best thing for most. But for us, serving our customers better is our #1 priority. With this different and new platform, we believe that we can perform better than ever to fulfil your expectation.
နံပါတ်၁ ချိတ်တာ အများအတွက်ေကာင်းပေမယ့်ကျွန်တော်တို့အတွက်ကတော့အိုင်စီတီချစ်ပရိတ်သက်ကြီးကိုဝန်ဆောင်မှုအကောင်းဆုံးပေးတဲ့နံပါတ်၁ ကိုပဲပို၍ လိုချင်ပါတယ်။ ဒီပလက်ဖောင်းအသစ်ဖြင့်လည်း ယခုထက်ပိုပြီး ကောင်းမွန်တဲ့ ဝန်ဆောင်မှုတွေကိုပေးနိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။
Now, you might be wondering what will happen to your account at ICT.com.mm. We will guide you through as follows.
1. Your account – we have migrated all of our customers’ accounts successfully. For your information, we have never kept customers’ passwords or credit cards information.
အကောင့်တွေအားလုံးကို အောင်မြင်စွာ ပလက်ဖောင်းအသစ်သို့ပြောင်းရွှေ့ပြီးပါပြီ။ အချို့သိချင်ကြ မယ်ထင်လို့မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ ဝယ်ယူသူများရဲ့ စကားဝှက် သို့မဟုတ် credit card အချက်အလက်များကိုအိုင်စီတီက ဘယ်ေတာ့မှသိမ်းဆည်းထားခြင်း မရှိပါ။ မြင်ခွင့်လည်း မရှိပါဘူး။
2. Your credential – this isabit inconvenience and our sincerest apologies We did try our best forasmoother transaction. As we stated above, we are now onanew and different platform; thus, bringing the passwords is not possible. The solution, you have to re-registeranew account by registering with your email address and password. Please note that your email address must be the same.
Please visit this link to re-register: https://www.ict.com.mm/account/
We have also sent an email to all of the customers. If you arearegistered customer, please check your email for instruction for the link and it will expire in seven days.
ဒီအချက်အလက်အတွက်အဆင်မပြေမှုများကိုတောင်းပန်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့အစွမ်းကုန်ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ သို့ပေမယ့်မတူညီတဲ့ပလက်ဖောင်း ၂ ခုကြောင့်စကားဝှက်တွကိုရွှေ့ပြောင်းလို့မရနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ ထို့ကြောင့်ဝယ်ယူသူများကိုအရင်အကောင့်အတိုင်း ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်ဖို့အောက်ပါလင့်မှာ အရင်က ဝယ်ယူခဲ့တဲ့အီးမေးလ်လိပ်စာအတိုင်း ထပ်မံမှတ်ပံတင်ပေးရန်ပန်ကြားအပ်ပါတယ်။မှတ်ပုံတင်ပြီးသည်နှင့်လော့အင်ပြန်လည်လုပ်ပြီး ဝင်ရောက်နိုင်ပါတယ်။ https://www.ict.com.mm/account/
အိုင်စီတီမှလည်း activation လင့်ကိုအီးမေးလ်ပို့ထားပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ ၇ ရက်အတွင်း လင့်ကသက်တမ်း ကုန်ဆုံးမှာ ဖြစ်ပါသည်။
3. Your previous order(s) – Don’t worry, if you register again with the same email address as before, you will see all purchases at ICT.com.mm.
စိတ်မပူပါနဲ့။ အီးမေးလ်အကောင့်အတူတူဖြင့်မှတ်ပုံတင်ပြီး လော့အင်ပြန်လည်ဝင်ရောက်သည်ဖြင့် အော်ဒါအဟောင်းများကိုပြန်လည်မြင်တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
4. ICT Gift Cards / Gift Codes – if you have purchased gift codes from us before and haven’t used it yet? Don’t worry, one of our representatives will contact you and issueanew gift card/codes to shop as usual.
အရင်တုန်းက လက်ဆောင်ကဒ်/ကုဒ်တွေဝယ်ယူဖူးရင်ကျွန်တော်တို့အိုင်စီတီအဖွဲ့သားများမှဆက်သွယ်လာမှာဖြစ်ပြီး၊ ကုဒ်အသစ်ကို ပြန်လည်ပေးပို့ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အရင်အတိုင်း ဆက်လက်အသုံးပြုရုံပါပဲ။
5. Native Mobile Apps – we know that most of you are starting to enjoy using our native mobile apps on iOS and Android. We love our apps too. But, migrating to the new platform means we have to rebuild and restructure our apps from scratch. Thus, it will take weeks, and we promise you that you will be shopping on our apps again very soon. In the meantime, please do not use our iOS and Android apps anymore, until further announcement.
မိုဘိုင်းလ်အပ်ပလီကေးရှင်း အသုံးပြုနေသူများအတွက်တော့တောင်းပန်ပါရစေ။ ကျွန်တော်တို့လည်းသိပါတယ်အသုံးပြုသူတွေနှစ်သက်ကြတယ်ဆိုတာ။ ဒါပေမယ့်ပလက်ဖောင်းအသစ်ပြောင်းသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်အစကနေ ပြန်လည်တည်ဆောက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ များမကြာမီမိုဘိုင်းလ်အပ်ပလီကေးရှင်းအသစ်ကိုကြေညာပေးပါ့မယ်။ ကြော်ငြာချက်မထုတ်မီအထိဒီနေ့ကစပြီး မသုံးဖို့နဲ့၊အသုံးပြု
လို့မရတော့ဘူး ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးလိုပါတယ်။
Moreover, we can assure you that your shopping experience will be better at www.ICT.com.mm, the #1 online tech retailer in Myanmar. And you will be seeing plenty of nifty new features in these coming new year.
ကျွန်တော်တို့ www.ICT.com.mm ကိုဒီပလက်ဖောင်းအသစ်နဲ့ ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ အွန်းလိုင်းရှော့ပင်းအတွေ့အကြုံကိုပေးးနိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။ ဒါ အပြင်အသစ်အသစ်တွေနဲ့ အိုင်စီတီချစ်ပရိတ်သတ်ကြီး အကြိုက်တွေ့မယ့် အတွေ့အကြုံအသစ်တွေကိုလည်း များမကြာမီတွေ့ရမှာလို့လည်း အသိပေးပါရစေ။
Please do not hesitate to reach out to us as per signature if you have any questions about this.
Thank you for understanding in advance and happy shopping!
ကျေးဇူးပြုပြီး မေးခွန်းများရှိခဲ့ပါက အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဆက်သွယ်လို့ရပါတယ်။ နားလည်မှုအတွက် ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါသည်။ ပျော်ရွှင်စရာ ဈေးဝယ်ထွက်ခြင်း အရသာကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေခင်ဗျာ။
Hotline: 0977 055 6888
Newer ICT.com.mm မှာ Jumper EZBook S5 တွေပစ္စည်းပြန်ရောက်ပြီနော်…
Older ICT.com.mm မှာ Desktop RAM မျိုးစုံကို ဈေးနှုန်းမှန်ကန်စွာနဲ့ ဝယ်ယူနိုင်ပါပြီ